Fitokanana ny Toha-drano tany amin’ny Lemak’Ifanja sy fanolorana sekoly tao amin’ny EPP Antaboaka Anrivonimamo II nataon’ny Filohan’ny Antenimierandoholona – Sénat de Madagascar
September 10, 2018 Landivola CATUCIA
Nitokana ny Fotodrafitr’asa lehibe vitan’ny Fitondram-panjakana tao amin’ny Lemak’Ifanja ao amin’ny Distrikan’i Miarinarivo ny alakamisy 06 septambra 2018 ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO izay nisolo tena ny Filohan’ny Repoblika.
Toha-drano miisa telo izay entina manondraka ny Lemak’Ifanja mirefy 1000 ha, ahitana lakan-drano mirefy 8km hisokirana ny reniranon’i Kotombolo sy Ibizyhamatsy ity Toha-drano. Tanjonany hampitomboana ny vokatra izay efa mahatratra nahatratra 5 taonina isaky ny hektara no mivoaka ao amin’ny Kaominina Anosibe Ifanja sy ny Kaominina Sarobaratra ankehitriny.
Nambaran’ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO fa tsy kobaka am-bava ny fanamby nataon’ny Filohan’ny Repoblika Hery RAJAONARIMAMPIANINA ka porofon’izany izao zava-bitan’ny Fitondrana izao. Nentaniny ihany koa ny mponina any an-toerana mba hitandro sy hikojakoja ny fotodrafitr’asa mba ho lovain’ny taranaka any aoriana.
Ankoatr’izay dia notokanana ihany koa ny sekoly iray izay misy efitra roa, naorina tao amin’ny EPP Antaboaka Arivonimamo II ho fanampin’ny efitrano fianarana. Fanomezana izay natolotry ny Taranak’Andriamatoa RAKOTOARIVONONA sy Ramatoa RANORO, izay Ray aman-dRenin’ny vadin’ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO ihany koa.Nambaran’ny Filoha Rivo RAKOTOVAO izay nitondra ny tenin’ny Fianakaviana fa noho ny asam-pampianarana lehibe vitan’ny Ramatoa RANORO tao amin’io Kaominina Arivonimamo II io no anton’ny nanoloran’ny Fianakavina izany sekoly izany, ho tantara velona sy ho entin’ny Taranak’ i Arivonimamo handrato fianarana sy hanabe ireo ankizy any an-toerana.